Umatshini wokuhambisa ukutya, abathengisi - Abavelisi base China abenzi
I-feeder yebhanti inesakhiwo esilula kunye nokusebenza okuzinzileyo, ngakumbi umthamo omkhulu wokondla uyathandwa ngabasebenzisi. Ukuphumelela kwethu kwezobuchwephesha sisixhobo se-arch breaker, esinokuthi sinciphise uxinzelelo emlonyeni webin kunye nokuthintela izinto zokuphalaza emlonyeni womgqomo.
Ubunzima be-feeder ye-mass mass yamkela umgaqo wobunzima obuphindwe kabini kufutshane ne-resonance inertial vibration. Amandla okucheba abonelelwa ngerabha, kwaye eyona ntloko yentsimbi ye-vibration yeshear iyothusa iminyaka elishumi.
Uthotho lwe-Electromagnetic vibration feeder uthotho lusetyenziselwa ukuhambisa ibhloko, igranular kunye nezinto zomgubo ezisuka kwindawo yokugcina izinto okanye ifanele ukuya kwisixhobo esifumana ubuninzi, ngokufanayo nangokuqhubekekayo.
Umzimba ophambili wesixhobo sokuhambisa amalahle sokungcangcazela sitywinwe kwaye siqhagamshelene nokuvula okungaphantsi kwesisele. Uhlobo lwe-arch okanye imodeli yokukhupha ipleyiti kumatshini inxibelelana ngokuthe ngqo nezinto ezikumgqomo wesetyhula.
Uhlobo lwe-K lokuphindaphinda kwamalahle usebenzisa i-crank yokudibanisa intonga yokurhuqa isitya esisezantsi seedigri ezi-5 ezantsi ukwenza intshukumo yokubuyisela kumgca wokuhambisa, ukuze ikhuphe ngokufanayo amalahle okanye ezinye izinto ezikhululekileyo kunye nezinto zomgubo kunye nepropathi encinci yokugaya kunye ne-viscosity encinci izixhobo zokondla izixhobo zokufumana.
ZG feed motor lokungcangcazela feeder isetyenziswa ngokubanzi kwezimbiwa, yokunyibilikisa isinyithi, amalahle, amandla thermal, umlilo-enganyangekiyo, iglasi, izinto zokwakha, ishishini ukukhanya, iinkozo kunye namanye amashishini, unako ukuvimba, granular kunye nomgubo izinto, iyunifomu okanye izixhobo lokondla oluninzi.